Ngwunye Liquid - Sffiltech
Home » ngwaahịa » Ngwunye Liquid
MF usoro Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Akpụkpọ anụ
Ndabere azumazu ụlọ usoro usoro DFX
Nkọwa:DKD bụ onye ndu ụwa nke na - ahụ maka nhicha nhicha onwe, ọ nwere usoro zuru oke ụdị nhicha nhicha nke onwe, usoro atọ, dabara na oge dị iche iche, iji zute ndị ahịa ụlọ ọrụ dị iche iche maka ịhazi nhicha nhicha nke onwe ha.
Ndabere azumazu ụlọ usoro DFM DFG usoro
Nkọwa:Liquid na-aga site na mbata, ihe dị n'ime na-agbanwe skirper 100% agbakwunyere na elu nke ihe nzacha ahụ, mmiri na-asọpụta site na elu nke ihe ndozi ahụ gaa na mpụga ya, adịghị ọcha ahụ ga-adaba na mbara ala ya na mmiri na-asọpụta site na mpụta ya; ka oge na-aga, adịghị ike ya na-abawanye, na nrụgide dị iche na-ebili, nke kwesịrị ịsacha ihe nzacha ahụ dabere na nrụgide dị iche ma ọ bụ mgbe niile.
Ndaghachi azụ akpaka usoro sistemụ ụlọ BCMseries
Nkọwa:BCM zuru oke azụ ịsa ahụ nzacha na-edozi maka adabara elu mmiri, nnukwu ọsọ, viscosity fluid pat element fluid.
Ihe omumu ihe omuma nke BCM zuru oke azumazu ulo bu ihe eji aru oru ya na nke eletriki, nke nwere uru nke ihe ezi uche di na ya, oru nhicha nke oma, onu ahia ya di ala, na-aga n’ihu n’iru osisa, wdg. mmiri inpa oil, mmiri ballast, mmiri ịba ọcha n'anya gburugburu, wdg.
Cartridges pP na-atọ ụtọ
Nkọwa:A na-ewu katriki LPPF nke polypropylene ọtụtụ, na-egosipụta ọnụego mmiri dị elu, ndakọrịta kemikal na ikike ruru unyi. Ihe nzacha ndị a dị mma maka iwepu ihe mmetọ na ngwakọta colloidal na filtration ịgba ọgwụ mgbochi.
Carbonges carbon fiber na-arụ ọrụ n'ime ya
Nkọwa:A na-emepụta katriiki LFC site na eriri carbon na-arụ ọrụ na ihe ndị polypropylene na-arụ ọrụ, mepụtara maka decolorization, deodorization na adsorption achọghị, ọkachasị maka oxidizing bekee na mwepụ ihe ndị dị na Organic na ụlọ ọrụ mmiri. Ha nwere ike ịnye ọnụego mmiri dị elu na mgbada dị ala, ịhapụ ihe na-adịghị egbu egbu yana ịdị mma maka ojiji. Na mgbakwunye, ha bụ usoro akụ na ụba ọzọ na carbon cartridges na-arụ ọrụ.
Iko akwara gilasi iko
Nkọwa:A na-eji katripolymer filter cartridges nke membrane hydrophilic PTFE na ihe ndị dị na PVDF, na-enye nsị mmiri dị elu, ọnụego mmiri dị elu na ndụ ogologo ọrụ. N'ihi njirimara nke njiko kemịkalụ kachasị na nguzo nke oxidation, ha dị mma maka ngwa nnweta mmiri mmiri na mmiri.
Akpụkpọ ahụ ptfe nyo cartridges
Nkọwa:Ejiri ngwongwo nzacha nke LPTA site na membrane hydrophobic PTFE na-adịgide adịgide, nke ahaziri iche maka ngwa ịgba ọtọ na ngwa gas na-emepụta ọgwụ. Ha na-enyocha iguzosi ike n'ezi ihe, na-enye nchedo usoro kachasị elu, ihe ntanetị dị elu, oke iru mmiri na nnukwu ịbanye na sterization steepụ. Ihe nzacha ndị a nwere ike ịmịkpọ-steriliz ugboro ugboro maka ndụ ọrụ ogologo.
Membrane PVDF ngwongwo nza
Nkọwa:A na-ahazi usoro ngwakọ LPSL ahaziri iche iji kesasị akụkụ irighiri ihe nke plasma. Ha na-egosipụta ihe ngosipụta dị ala na-enweghị ihe karịrị 10mg / 10 ”, ndụ ọrụ ogologo oge yana usoro 40 nke SIP. Ihe nzacha ndị a nwere ike iji ike njikwa ngwaahịa ikpeazụ.
Nkọwa:Ejiri katridges LPM na-arụ ọrụ dị elu, hydrophilic ngwakọta cellulose esters akpụkpọ ahụ, na-enye ọnụego mmiri dị elu, adsorption protein dị ala na nchekwa microbiological dị elu. E mere ihe nzacha ndị a iji belata ọnụ ma dabara adaba maka ịgba ọgwụ mgbochi mgbochi.
Nkọwa:Welded zuru ezu maka ịrụ ọrụ dị elu na nzacha na-enweghị nsogbu
Ejirila ngwongwo zuru oke na mgbaaka akpa akpa Sffiltech na-enye nzacha 100% na-enweghị mmachi
Mgbaaka akara Sffiltech nrụgide na-arụ ọrụ na-enye mgbaaka na-agbanwe agbanwe, nke mmiri na-agbanwe agbanwe nke na-adabara ụlọ akpa akpa ọ bụla.
Ihe si na silicone na ihe ndi na-acho acho
Mbido okpomoku pụrụ iche na mmiri elu ala na-ebelata belata fiber
Guzosie ike na seelded seams nke kwekọrọ na nkata na-ejigide ihe
Membrane Pes na-edegharị katriki
Nkọwa:Doctopfilter multi-katrij elu eruba nzacha ụlọ ụlọ si 9 cartridges ka 100 katridges, na ogologo nke katrij bụ 20 "， 30" ， 40 "， 50". Housinglọ dị iche iche nke katalọgụ dị iche iche dị, na-ewere mkpọchi pụrụ iche na onye inyeaka mkpuchi mmiri.
Lọ nkwakọ ngwaahịa katọn dị mma iji tinye ya na katrijị abụọ mepere emepe na otu oghe ngwụcha 222. Hooping pụrụ iche & nkwupụta ụda; imeghe ngwa ngwa. O di nfe imeghe, imechi ya, megharia ya ma dozie ya
Nkọwa:Ihe eji eme ihe ana –eme ka ahihia ihe eji eme ihe
2.Soro site na njikọta ikuku na-enweghị ihe eji egbochi ma ọ bụ nrapado ọ bụla.
3.100% Polypropylene dị ọcha agaghị eme ka mmetọ ọ bụla mmiri
4.Wide Chemical ndakọrịta
5.Groove imewe ka ịgbatị mpaghara filtration elu mpaghara
6.Ma otutu udiri adiri diri.
Igwe anaghị agba nchara katalọgụ
Pp nzacha akwa
Nkọwa:PP filter filter na-eme 100% filament polypropylene fiber, mgbe agịga pịrịchara, na-abụ abụ ma ọ bụ na-egbu egbu maka ụrọ polypropylene na-ahụ ihe, mgbe ahụ pp nyo ahụ nwere ike ịkpụ n'ime akpa pp filter.
Pe nyo akwa
Nkọwa:A na - ahụ ihe nhicha ahụ na - eme 100% filament polyester, mgbe agịgapịrịchara ya, ma ọ bụ na --eme ka ọ bụrụ maka polyester raw filter nwere ihe, mgbe ahụ pe filter chere nwere ike ịkpụ n'ime akpa akpa.
Nkọwa:1) Ihe: 100% naịlọn (polyester dị ma achọrọ)
2) Uwe mkpuchi: Plain weave (Twill weave dị ma ọ bụrụ na achọrọ)
3) Mesh gụọ: 4T ~ 140T ntupu / cm (13mesh 355 mesh / inch)
4) Max. obosara: 365cm (143 inch)
5) Agba: ọcha / odo / ojii
Nkọwa:Acid-iguzogide Acid, iguzogide alkali, iguzogide okpomoku di elu, esemokwu siri ike na ezigbo abrasion
Akpa mgbanaka mgbanaka
Nkọwa:Nkwanye aru na ihe nke ss, iron carbon na ndi ozo.
Mgbanaka snap nwere ike imeghari ulo ndozi akpa ọ bụla
Sffiltech filter na-akwadosi ike ike itinye ngwa ọrụ na-eme ka ntinye nke akpa nza ahụ banye na akpa akpa ma na-eme ka ọ dịkwuo mma itinye akpa nzacha ahụ n'ime nkata na-egbochi ihe.
Home Previous 1 2 Osoteikpeazụ - Total 36 1 dere Ugbu A page / Total 2 20 kwa na peeji nke
Ihu mkpuchi ihu
Ndozi onwe nhicha nhicha ụlọ
Housinglọ nchekwa akpa
Ngwongwo nzacha na akpa nzacha
Sock wee mee
Ihe Nleba Anya maka Biostatic
Ntughari ikuku nke ikuku
Mpempe akpa na kọmpat
EPA HEPA Na ULPA nzacha
Nzacha Ngwa pụrụ iche
Akpụkpọaka akpaaka akpaaka akpaaka
Ọkara Auto Myọcha tube wingkwa Akwa Machine
Ngwunye mkpuchi nke akpa Flter akpa
Ngwunye Ekere Na-agbaze
Ngwunye dị mkpụmkpụ mkpụmkpụ
Igwe eji akwa akwa ogologo
Ngwunye igwe na-ekpo ọkụ
Akpaaka na-enyocha akpa akpa akpa
Ngwunye Ngwunye Ngwunye V Style Liquid
Igwe mkpuchi ihe mkpuchi akpa na akpa maka nchekwa ọ na - enweghị eriri ọ bụla
Myọcha Bag Snap Band Ime Machine
Faksị: 021 33321505
Adreesị: Roomlọ NO.5004, North-Bullying, New Cangyuan Tech Building, NO.951 ianzọ Jianchuan, Minhang nke Minhang, Shanghai China